ဧဒင်ဥယျာဉ်အတွင်း ဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရသော- ယေရှု | Jesus - Suffering in the Garden | Real Conversion
ဧဒင်ဥယျာဉ်အတွင်း ဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရသော- ယေရှု
ဖေဖော်ဝါရီလ ( ၂၈ ) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
“ထိုအခါ ဂေသရှေမန်အရပ်သို့ရောက်ကြလျှင် ကိုယ်တော်က၊ ငါဆု တောင်းစဉ်တွင် သင်တို့သည် ဤအရပ်၌ထိုင်နေကြ လော့ဟု တပည့် တော်တို့ အားမိန့်တော်မူပြီးမှ၊ ပေတရု၊ ယာကုပ်၊ ယောဟန်တို့ကို ခေါ်သွား၍၊ မိန်းမောတွေဝေခြင်း၊ စိတ်ပူပန်ခြင်းသို့ရောက်တော်မူ၏။ ထိုအခါ ငါသည် သေလောက်အောင် စိတ်နှလုံးအလွန်ညှိုးငယ်ခြင်း ရှိ၏။ ဤအရပ်၌စောင့်နေကြလော့ဟု တပည့်တော်သုံးယောက်တို့အား မိန့်တော်မူ ၍။” ( (မာကု ၁၄း ၃၂- ၃၄ ) )
ခရစ်တော်သည် တပည့်တော်များနှင့်အတူ ပသခါကို စားသောက်ခဲ့သည်။ ညစာ စား ပွဲအပြီးတွင် ခရစ်တော်သည် သူတို့အား မုန့်နှင့်ခွက်ကိုပေးတော်မူပြီး ၎င်းကို “သခင်ဘုရား၏ ပွဲတော်” ဟုပင် ခေါ်ကြသည်။ သူက မုန့်သည် နောက်နေ့နံနက်တွင် ကားစင်တင်ခံရမည့် သူ၏ခန္ဓာကို ပုံဆောင်ထားကြောင်း မိန့်တော်မူသည်။ ခွက်မူကား ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို ဆေးကြောမည့် သူသွန်းလောင်းထားသောအသွေးတော်ကို ပုံဆောင်ထားကြောင်း မိန့်တော်မူ သည်။ ထို့နောက် ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည် တေးသီချင်းကို သီဆိုကျူးဧကြပြီး ညကို ဝင်စားရန် အခန်းကို စွန့်ခွါခဲ့ကြသည်။
သူတို့သည် ယေရုရှလင်အရှေ့ပိုင်းသို့သွားကြပြီး ဆဲဒရွင်တံတားကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ကြ သည်။ နောက်ထပ်အနည်းငယ်သွားပြီး ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့သွားခဲ့ကြသည်။ယေရှုသည် တပည့်တော်ရှစ်ယောက်အား ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်ထိပ်တွင် ထားခဲ့ပြီး သူ့အတွက် ဆုတောင်း ကြရန် မှာကြားတော်မူခဲ့သည်။ သူသည် ပေတရု၊ ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကို ထားရစ်ခဲ့သည့် ဥယျာဉ်အတွင်းထဲသို့ သူကိုယ်တိုင်သွားခဲ့သည်။ ယေရှုသည် အမှောင်ထဲသို့ သူကိုယ်တိုင် သဖန်းပင်အောက်အထိ သွားခဲ့သည်။ “မိန်းမောတွေဝေခြင်း၊ စိတ်ပူပန်ခြင်းသို့ ရောက် တော်မူ၏။ ထိုမှအနည်းငယ်လွန်ပြန်လျှင်၊ မြေပေါ်မှာပြပ်ဝပ်၍ အိုအဘ၊ ခမည်းတော်၊ ကိုယ်တော်သည်အလုံးစုံတို့ကိုတတ်နိူင်တော်မူ၏။ဤခွက်ကို အကျွန်ုပ်မှလွှဲတော်မူပါ။” (မာကု ၁၄း ၃၃- ၃၅ )
အင်္ဂလိကန်အသင်းတော်ရှိ Bishop J. C. Ryle က “ဂေသရှေမာန်ဥယျာဉ်အတွင်းရှိ ငါတို့သခင်၏ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းသည် သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် နက်နဲသည့် အကြောင်းအရာ ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအကြောင်းအရာတွင် ပညာအရှိဆုံး ဓမ္မပညာရှင်များပင်လျှင် ရှင်းမပြနိူင် သောအရာများပါဝင်ပေသည်။ အမှန်တကယ်ပါဝင်ပါသည်။ အရေးကြီးသည့် ရှင်း လင်းသော သမ္မာတရားပင်ဖြစ်ပါသည်” ဟု ဆိုသည်။ (J. C. Ryle, မာကုနှင့်ပါတ်သက်ပြီး ရှင်းပြအမှတ် အသား၊ The Banner of Truth Trust, ၁၉၉၄၊ စာ- ၃၁၆၊ မာကု ၁၄း ၃၂- ၄၂ မှတ်စု )
ယနေ့ နံနက်တွင် စိတ်ထဲ၌ ဂေသရှေမာန်ဥယျာဉ်သို့ သွားကြပါစို့လား။ မာကုက “ပြင်းရှသောဝေဒနာကို ခံစားရသည်” ဟုဆိုပါသည်။ ( မာကု ၁၄း ၃၃ ) ဂရိစကားလုံး “ekthambeisthai” က “ပြင်းစွာသောဝေဒနာ၊ နာကျင်စွာခံစားရခြင်း၊ ပူဆွေးသောကများ” ဟု အဓိပ္ပါယ်ပေါ်လွင်စေပါသည်။ “ငါသည် သေလောက်အောင် စိတ်နှလုံးအလွန်ညှိုးငယ်ခြင်းရှိ ၏။ ….ထိုမှအနည်းငယ်လွန်ပြန်လျှင် မြေပေါ်မှာ ပြပ်ဝပ်၍။” ( မာကု ၁၄း ၃၄- ၃၅ )
Bishop Ryle က “ဤဖော်ပြချက်များအတွက် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည့် ရှင်းပြချက် တစ်ခုတည်းရှိသည်။ ကိုယ်ကာယတွင်ခံစားရမည့် ဒုက္ခဝေဒနာကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းမဟုတ်။ လူသားတို့၏အပြစ်ဝန်ထုတ်ကြီးပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချိန်က သူ့အား စိတ်ကိုဖိစီးစေသောအ ရာပင်ဖြစ်ပါသည်။သူ့အပေါ်တင်ထားသောအပြစ်သည် ဖော်မပြနိူင်လောက်အောင် လေးလံ လျက်ရှိပါသည်။ ထိုအရာမှာ ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ ကျိန်ခြင်းကို ဖော်ဆောင်စေပါသည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကို ဆောင်ယူသွားပါသည်။အပြစ်မရှိသောသူကို ကျွန်ုပ်တို့အ တွက် အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတော်မူသည်။ သူအပေါ်တင်ထားသောအပြစ်ဝန်သည် မည်သို့ မျှဝှက်ထား၍ မရသောအပြစ်ဝန်ပင်ဖြစ်ပါသတည်း။ ထိုအရာမှာ ဝမ်းနည်းခြင်း၏အထိန်းအ မှတ်တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါတော့သည်။ ဂေသရှေမာန်ဥယျာဉ်အတွင်း၌ ကျွန်ုပ်တို့သခင်ယေရှုခံစားရ သော ဒုက္ခဝေဒနာများစွာကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိူင်ပါသည်။ (ဧဝံဂေလိအသင်းတော်များ၏အ တွေးအခေါ်များမှာ) အပြစ်နှင့်ပါတ်သက်ပြီးတော့ ပိုတောင် အလှမ်းဝေးလျက်ရှိပါသည်။” (Ryle, စာ- ၃၁၇ )
အသင်းတော်ဘုရားကျောင်းပျက်ကွက်ခြင်း၊ သမ္မာကျမ်းစာဖတ်ရှုလေ့လာမည့်အစား ဂိမ်းဆော့ကစားခြင်း၊ ပျော်မွေ့ကခုန်ခြင်း၊ အရက်သောက်ခြင်းစသည့်အပြစ်များသည် ပေါ့ပေါ့ တန်တန်အပြစ်များဟု မတွေ့မိပါစေနှင့်။ သင့်အသက်တာတွင်ရှိသော ဤအပြစ်အလုံးစုံတို့ သည် ဂေသရှေမာန်ဥယျာဉ်အတွင်း ယေရှုကိုယ်ပေါ်တင်လျက်ရှိထားပြီ။ များစွာသောအရာ တွေရှိလျက်နေသေးသည်။ ဂေသရှေမာန်ဥယျာဉ်အတွင်းက ယေရှုအပေါ်တင်ထားသောအ ကြီးမားဆုံးအပြစ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီဇအပြစ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုးသွင်းပျက်စီးခြင်း၊ လုံးဝပျက် စီးသည့်အပြစ်သားဖြစ်ခြင်းက ရောက်ရှိလာသောအရာများဖြစ်ပါသည်။
“တပ်မက်သောစိတ်အားဖြင့် ဤကမ္ဘာလောကကြီးတွင် ပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်စေသော အရာ” ပင်ဖြစ်ပါသည်။( ၂ပေ ၁း ၄ ) “ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် မသန့်ရှင်းသောသူများဖြစ် သောကြောင့်ပေတည်း။” ( ဟေရှာယ ၆၄း ၆ ) တပ်မက်ခြင်း၊ လောဘ၊ ပုန်ကန်ခြင်းတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင့်သော ကျွန်ုပ်တို့၏သဘာဝတရားများပင်ဖြစ်ပါသည်။ “ဘုရားသခင် ကို ဆန့်ကျင်သောအရာသည် သင်၏ဇာတိအလိုဖြစ်သည်။”ဆိုလိုသည်မှာ ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ပြီး သူမပါဘဲ အသက်ရှင်လိုသော စိတ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ( ရောမ ၈း ၇ ) သင်၌ရှိသော အရာသည် ပိုင်စိုးပိုင်နင်း မကောင်းသောစိတ်နှလုံးပင်ဖြစ်ပါသည်။ အပြစ်နှင့်ပြည့်နေသောစိတ် နှလုံး။ ပထမဆုံးအပြစ်ကိုပြုသူ အာဒံထံက ရရှိလာသောအပြစ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။မျိုးစေ့၊ အသွေး၊ စိတ်နှလုံးအားဖြင့် ဆင်းသက်လာသော အပြစ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ( ရောမ ၅း ၁၂ ) “တယောက် သောသူ၏နားမထောင်ခြင်းအားဖြင့် [ လူအပေါင်းတို့သည် ] အပြစ်သားများဖြစ်လာကြပါ သည်။” ( ရောမ ၅း ၁၉ )
မွေးကင်းစကလေးသည် အပြစ်တွင် မည်သို့မွေးဖွါးလာသည်ကို ကြည့်ပါ။ A. W. Pink က “လူ့ဘ၀၏ပျက်စီးခြင်းက ကလေးများ၏အသက်တာတွင် သိသာစေသည်။ ရှေးပဝေသနီကလုပ်ဆောင်သည်အတိုင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ လူသားတွင် အမွေခံရန် ကောင်း မြတ်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့လျှင် မွေးကင်းစကလေးလေးတွင် ထင်ရှားလာပေမည်။ ထိုအ ချက်သည် လောက၌ အပြစ်ဆိုသောမကောင်းမှုများအစမပြုခင် ဖြစ်လာနိူင်သည်။ ဝေးပါစေ။ လူသားတစ်ဦး၏ကြီးထွားမှုနှင့်ဆိုင်သည့် မတူညီသော အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာ ကြီးလာသည် နှင့်အမျှ မကောင်းသောအရာများဖြစ်လာပါတော့သည်။ မိမိအလိုဆန္ဒကို ထင်ရှားစေကြသည်။ သူတို့အတွက် မကောင်းသောအရာအတွက် ငိုကြွေးကြသည်။ ငြင်းဆန်သောအခါ မိဘများကို စိတ်တိုကြသည်။သူတို့ကို ရိုက်ဖို့ပင် ကြိုးစားအားထုတ်ကြသည်။ထိုသို့မွေးဖွါးလာသူများ၊ ရိုး သားမှုအလယ်တွင် ကြီးထွားလာသောသူများသည် ခိုးမှုသက်သေမတိုင်မှီတွင် ခိုးမှုဟူသော အပြစ်ရှိကြသည်။ဤသို့သောအမှားများကြောင့် လူသားသဘာဝသည် ၎င်းတည်ရှိသည့်အချိန် ကာလမှစ၍ အပြစ်ရှိသောသူများအဖြစ်တွေ့မြင်ရပါသည်။” (A. W. Pink, Gleanings from the Scriptures, Man’s Total Depravity, Moody Press, ၁၉၈၁၊ စာ- ၁၆၃၊ ၁၆၄ ) မင်နီဆိုဒါရာဇဝတ်မှုက ၎င်း၏တင်ပြချက်တစ်ခုတွင် ရှင်းလင်းစွာတွေ့မြင်ရပါသည်။ “ကလေး တိုင်းသည် ၎င်းတို့၏ကလေးဘဝကို ရိုင်းစိုင်းသည့်အခြေအနေတွင် အစပြုပါသည်။ သူသည် လုံးဝတကိုယ်ကောင်းဆန်ပြီးမိမိဗဟိုပြုအသက်တာရှိသူဖြစ်သည်။ သူအလိုရှိသောအရာကို အလိုရှိသောအချိန်တွင် လိုအပ်သည်။သူ့မိခင်၏ဂရုစိုက်မှု၊ ကစားဖော်အရုပ်၊ ဦးလေး၏ဂရု စိုက်ကြည့်မှုတို့ဖြစ်သည်။ ဤအရာများက သူ့ကိုငြင်းဆန်စေခဲ့ပြီးသူ့ အမျက်ထွက်ခြင်းနှင့် ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုများကို အလန့်တကြားဖြစ်စေသည်။ ထိုလူသတ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သော အရာများက အကူအညီမဲ့စေသည်မဟုတ်။ ဆိုလိုသည်မှာ အဓကကလေးများမဟုတ်၊ ကလေးများအားလုံးသည် အပြစ်သားဘ၀ဖြင့် စတင်မွေးဖွါးလာကြပါသည်။” (Haddon W. Robinson ၊ သမ္မာကျမ်းစာနည်းလမ်းတကျတရားဟောခြင်း၊ Baker Book House, ၁၉၈၀၊ စာ-၁၄၄၊ ၁၄၅ ) ဒေါက်တာ Isaac Watts က ဤသို့ဆိုသည်။
အပြစ်မျိုးစေ့သည် သေခြင်းအတွက် ကြီးထွားလာ၊
သင်ပေးသည့်ပညတ်က စုံလင်သောနှလုံးသားတစ်ခုကို တောင်းဆိုထား၊
သို့သော် အရာအားလုံးတွင် ပျက်စီးခံနေရ။
(“ဆာလံ ၅၁၊” Dr. Isaac Watts, ၁၆၇၄-၁၇၄၈).
ကလေးငယ်သည် မွေးစကတည်းက ကြောက်လန့်နေသည်။ အဘယ်တိရိစ္ဆာလေးမှ ထိုသို့မ ဖြစ်။ သူတို့သည် လူကလေးကဲ့သို့သာ ကြောက်လန့်နေမည်ဆိုလျှင် တောအုပ်ကြီးထွဲတွင် အ ခြားတိရိစ္ဆာန်များက ကိုက်သတ်စားကြလိမ့်မည်။ လူသားကလေးများသည် ဘုရားသခင်၊ အခွင့်အာဏာ၊ နှင့် အသက်ကို မွေးကတည်းက ကြောက်လန့်နေကြသည်။ အဘယ့်ကြောင့် နည်း။ သူတို့သည် အာဒံထဲက မွေးဖွါးလာကြသည်မှ မဟုတ်ဘဲ။ ထို့ကြောင့် သင်၏အာရုံစူး စိုက်မှုသည် ခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင်များကို ပုန်ကန်ရန်၊ ငြင်းဆန်ရန်၊သင့်နည်းလမ်းကို တောင်းဆိုရန်၊ မှန်ကန်သောအရာကိုလုပ်ဆောင်ဖို့ ငြင်းပယ်ရန် ပင်ဖြစ်သည်။ထိုအရာမှာ ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင် ကြုံတွေ့နေရသော ဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရခြင်းနှင့်သေခြင်း၏ အရင်းမြစ်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ မွေးရာပါအပြစ်ဖြစ်သတည်း။ ပြောင်းလဲပြီးနောက်ပိုင်းတွင်လည်း အပြစ်ပြုနေ သည်မှာ ဤအကြောင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ သင့်မိဘများက သင်သည် ခရစ်ယာန်လူငယ်လေး ဖြစ်သော်လည်း ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို လုပ်ဆောင်ရန် မုန်းတီးသည့် လူငယ်အပြစ် သားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဟု ထင်ကြပေမည်။
ကာယ၊ ဝစီ၊ မနော စသဖြင့် လူသားများပြုမိသောအပြစ်များကို ဤဗီဇအပြစ်ဖြင့်ထပ် ပေါင်းလိုက်လျှင် ယေရှု ရိုက်ပုတ်ခံရသည့်အကြောင်းတရားကို အလွယ်တကူပင် တွေ့မြင်လာ ရပေမည်။ဘုရားသခင်သည် တလောကလုံး၏အပြစ်ကို သူ့အပေါ်တင်လိုက်သောအခါ ရိုက် ပုတ်ညှင်းဆဲခြင်းကို ခံရလေသည်။
ဤအကြောင်းအရာကို ဖော်ပြသည့် ရှင်လုကာကို ကြည့်ကြပါစို့။ Scofield Study Bible ၌ စာမျက်နှာ ၁၁၀၈ တွင် ရှိပါသည်။ လုကာ ၂၂း ၁၄ တွင် ဖြစ်ပါသည်။ အားလုံးမတ် တပ်ရပ်ပြီး ကျယ်လောင်စွာဖတ်ပါ။
“ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံလျက်၊ အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့် ကြိုး စား၍ဆုတောင်းတော်မူ၏။ ချွေးထွက်တော်မူသည်ကား၊မြေပေါ်၌ ကျသောသွေးစက်ခဲကဲ့သို့ဖြစ်သတည်း။” ( လုကာ ၂၂း ၄၄ ) )
Bishop Ryle က “ဥယျာဉ်အတွင်း၌ ကျွန်ုပ်တို့သခင်ကျော်ဖြတ်သွားခဲ့ရသည့် နက်နဲ လွန်းသည့်ဒုက္ခဝေဒနာကို အဘယ်သို့ရှင်းပြနိူင်မည်နည်း။ ခံရသောဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်သည့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဝေဒနာများအတွက် အကြောင်းတရားကား အဘယ် နည်း။ ကျေနပ်လောက်စရာအဖြေတစ်ခုသာရှိသည်။ လောကအပြစ်ခံရသောဒုက္ခ၊ သူ့အပေါ် ကျရောက်သောဝေဒနာပင်ဖြစ်သည်။သူ့အား ပူဆွေးသောကဖြစ်စေသည့် လေးသောအပြစ် ဝန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထာဝရသားတော်အား ချွေးစက်များသွေးစက်အလားစီးဆင်းစေသည့် ဖိ နှိပ်သောအပြစ်ဝေဒနာပင်ဖြစ်ပါသည်။” (J. C. Ryle, လုကာ၊ အတွဲ ၂၊ The Banner of Truth Trust, ၂၀၁၅၊ စာ-၃၁၄၊၃၁၅၊ လုကာ ၂၂း ၄၄ မှတ်စု )
“ဘုရားသခင်သည်အပြစ်နှင့်ကင်းသောသူကို ငါတို့အပြစ်ကြောင့် အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတော်မူသည်။” ( ( ၂ကော ၅း ၂၁ ) )
“ထာဝရဘုရားသည် ခပ်သိမ်းသောငါတို့၏အပြစ်များကို သူ့အ ပေါ်၌တင်တော်မူ၏” ( (ဟေရှာယ ၅၃း ၆ ) )
“ငါတို့အပြစ်များကို ကိုယ်တော်တိုင် သစ်တိုင်မှာခံတော်မူပြီ။” ( (၁ပေတရု ၂း ၂၄ ) )
Bishop Ryle က “ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို ဥယျာဉ်ထဲ၌လည်းကောင်း၊ ကားတိုင်ပေါ်၌လည်းကောင်း ဆောင်ယူသည်ဟူသော ရှေးရိုးခံယူချက်ကိုလည်း အခိုင်အမာ ယုံကြည်ရမည်။ ခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်စီးကျသောချွေးစက်ကို အဘယ်ခံယူချက်မျိုးမှ ရှင်းပြနိူင်မည်မဟုတ်၊ သို့မဟုတ် အပြစ်ရှိသောလူ့စိတ်ကို ကျေနပ်စေမည်မဟုတ်။”(၎င်း ) Joseph Hart က ဤသို့ဆိုသည်။ .
နာကျင်ခြင်း၊ ညည်းတွားခြင်း၊ ချွေးစက်များသွေးစက်စီးကျခြင်း၊
(“မသိသောနာကျင်မှု၊” Joseph Hart, ၁၇၁၂-၁၇၆၈၊ “မစ်နိူက်နှင့်အိုလစ်ပရွင်း” သံစဉ်)
တဖန်၊ Joseph Hart က ဤသို့ဆိုသည်။
(“ဒုက္ခများစွာ သူခံစားခဲ့”၊ Joseph Hart ၊ ၁၇၁၂- ၁၇၆၈၊
“အပြစ်သားလာပါ” သံစဉ်ဖြစ်သည်။ )
William Williams ကလည်း ဤသို့ဆိုသည်။
ဝတ်လုံတော်သည် စိတ်ပျက်နာကျင်စရာ၊ အပြစ်သားအတွက် စတေးခံရ
( “ဝေဒနာဖြင့်ချစ်ခြင်း၊”, William Williams ၊ ၁၇၅၉၊
“မက်ကျစတိတ်ဆွတ်နက်စ်ဆစ်အင်ထရွန်း” သံစဉ် )
“ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံလျက်၊ အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့် ကြိုး စား၍ဆုတောင်းတော်မူ၏။ ချွေးထွက်တော်မူသည်ကား၊မြေပေါ်၌ ကျသောသွေးစက်ခဲကဲ့သို့ဖြစ်သတည်း။” (လုကာ ၂၂း ၄၄ ) )
ဤသည်မှာ ခရစ်တော်၏ ရန်ငြိမ်းစေခြင်းအစပြင်ဖြစ်ပါသည်။ “ကိုယ်စားခံခြင်း” ဟူ သည်မှာ အခြားသူ၏နေရာတွင် လူတစ်ယောက်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ခရစ် တော်သည် သင့်နေရာ၊ အပြစ်အတွက် ဒုက္ခခံစားခဲ့သည်။ သူ၌အပြစ်လုံးဝမရှိခဲ့ပါ။ ခရစ်တော် သည် ဂေသရှေမာန်ဥယျာဉ်အတွင်း၊ ညသန်းခေါင် သဖန်းပင်အောက်တွင် သင့်အပြစ်ကို ဆောင်ယူသူဖြစ်လာခဲ့သည်။ နောက်နေ့တွင် ကားတိုင်ပေါ်၌ သံမှိုနှင့်ရိုက်ထားပြီး သင့်အပြစ် အတွက် ပေးဆပ်ခဲ့ပြီးပြီ။ ထိုမေတ္တာကို မည်သို့ငြင်းပယ်နိူင်သနည်း။ ယေရှု၌ရှိသောမေတ္တာ သည် သင့်အဖို့ဖြစ်သည်။ သင့်အပြစ်ကိုရန်ငြိမ်းစေရန် သင့်ကိုယ်စားအသေခံသောသူသည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သူ့မေတ္တာသည် သင့်အသက်တာတွင် အဓိပ္ပါယ်ရှိ လာဖို့ သင်သည် အေးတိအေးစက် ဖြစ်လွန်းပါသလား။
သင်းအုပ်မရှိသည့်လူများကြားတွင် အသုဘအစီအစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်အား တိုက်တွန်းသည့် သုဘရာဇာတစ်ယောက်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ နေ့လည်စားကျွေးသည်။ ကျွန်ုပ်စားဖူးသမျှတွင် ထူးဆန်းနေပါသည်။ သင်္ချိုင်းတွင် အသေကောင်းများကို မြှုပ်နှံသည့်အ ခါ အသားညှပ်မုန့်ကို စားလေ့ရှိကြောင်းပြောသည်။ ကျွန်ုပ်အလုပ်ကို လုံးဝမရနိူင်ဘူး။ စား သောက်ဆိုင်ကနေ အပူတပြင်း ပြန်သွားခဲ့ရသည်။ သေသည့်ခန္ဓာနားတွင်ရှိနေစဉ် မုန့်ကို အ ဘယ်သို့စားနိူင်မည်နည်း။ တကယ့်ကို မကောင်းပါဘူး။ နောက်ပိုင်းတွင် ထိုအရာက သူ၏စိတ် ကို ကယောင်ချောက်ခြားမဖြစ်စေတော့သည်ကို သတိပြုမိလာပါသည်။ ခရစ်တော်သည် သင့် ကိုယ်စား ဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရသောအရာကို ကြားရသောအခါ သင်သည် အေးတိအေးစက် ဖြစ်နေပါသလားဟု မေးပါရစေ။ သင်အပြစ်ကျေအေးစေဖို့ ခရစ်တော်ခံရသောဝေဒနာကို ပြော သည့်အချိန်တွင် သင်သည် ကံကိုသာပုံချပါသလား။ သင့်အတွက် အမှန်တကယ် အဓိပ္ပါယ်ရှိ လာပါသလား။ လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် ခရစ်တော်ကို သံမှိုနှင့်ရိုက်ပြီး အနားတွင် အသေခံသည် ဖြစ်၍ သူ၏အဝတ်ကို လောင်းကစားလုပ်သည့် စစ်သားများကဲ့သို့ စိတ်နှလုံးမာကြောခက်ထန် သောသူဖြစ်ပါသလား။ ထိုသို့မဖြစ်ပါစေနှင့်။ ကယ်တင်ရှင်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီး သူ၏အသွေး တော်အားဖြင့် သင်၏အပြစ်ကို ဆေးကြောရန် ယနေ့နံနက်တွင် သင့်အား ငါတောင်းပန်ပါ၏။
သင်က “လက်လွှတ်အရှုံးခံရန် များစွာရှိသည်” ဟုဆိုသည်။ မာနတ်၏စကားကို နားမ ထောင်နှင့်တော့။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပါတ်တော်ထက် လောကမှာ အရေးကြီးသောအရာမ ရှိတော့ပါ။
အာ၊ ကျွန်ုပ်၏ကယ်တင်ရှင် အသွေးသွန်းလား၊ ကယ်တင်ရှင် အသေခံလား။
ထိုသို့သော ကျွန်ုပ်အတွက်ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များဖြင့် ပြည့်နှက်နေပါသလား။
ခံစားရသောမေတ္တာသည် ကျမျက်ရည်ထက် ပိုမိုအဖိုးထိုက်တန်လှ၊
သခင်၊ ကိုယ်ကို ပေးအပ်ပါ၏၊ လုပ်ဆောင်နိူင်သောအရာ အားလုံးပေ။
(“ကယ်တင်ရှင် အသွေးသွန်းသလား။” ၊ Dr. Isaac Watts, ၁၆၇၄- ၁၇၄၈ ) )
ယေရှုကို ယုံကြည်ကိုးစားဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား။ သူ့အတွက် အသက်တာကို ဆက်ကပ်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား။သူကိုချစ်သောမေတ္တာသည် သင့်စိတ်နှလုံးကို လှုပ်ရှား စေပါသလား။ ထိုသို့မဟုတ်လျှင် မသွားပါနှင့်။ သို့သော် သင်လက်ခံလျှင် ဆွေးနွေးခန်းသို့သွား ပါ။ ဒေါက်တာ Cagan က သင့်အား ဆွေးနွေးနိူင်သည့် တိတ်ဆိတ်သောနေရာသို့ ခေါ်ဆောင် သွားပါလိမ့်မည်။ အာမင်။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ ကျမ်းစာဖတ်ကြားခြင်းကို မစ္စတာ Abel Prudhomme က ဆောင်ရွက်ပါသည်။ မာကု ၁၄း ၃၂- ၃၄
"ကျိန်ခြင်းများစွာကိုခံရသည်။"၊ (Joseph Hart ၊ ၁၇၁၂-၁၇၆၈) ရေးစပ်သည်။